OPDOn Robotii Afaan Oromoo Dubbatu!
HomeAfaan OromooOPDOn Robotii Afaan Oromoo Dubbatu!
Damee Boruutin: Bitootessa 12, 2019
OPDO was created in the later stages of the civil war by captured troops of the then Ethiopia leader Mengistu Hailemariam to serve as a satellite organization for the upcoming TPLF rule. Their genesis was mainly in a response to the growing influence of the Oromo rebel group, OLF.
Robotiin waan dhimma baasuuf saganteefame ala waan biraa hojjechuu hin danda’u. Sammuun robotii nama biraan waan qophaa’eef kan mataa isaa tahee ittiin yaadu hin qabu. Yoo sagantaan isaa dhume irra deddeebi’ee isuma saganteefame sana dubbata. OPDOn jalqabaa kaaftee robotii afaan Oromoo dubbatuu TPLFiin saganteefamte. Wagga digdamii torba guutuu kan sammuun ishee miicamaa ture boontuu biyya Itoophiyaa jedhamtu ijaaruu fi guddisuu dha.
Karaa biraa warri Oromoo bilisa baafna jedhee deemu yakkamtoota fi shorkokeesitoota kan hidhamuu fi ajjeessamuun biyyaa lafaa irraa dhabuu qaban akka tahetti baraa guddate. Qabsawwan Oromoo dhabbamsiisu irratti gahaa duraa fi guddaa kan qabu OPDO dha. Hammeenya gocha isaanii kana baayyee ittiin boonu. Biyyi Itoophiyyaa jedhamtu kun akka hin diigamne kan utubaa tahee baachaa jiru OPDO dha jedhanii fudhatu. Kanaafuu hojii badii kana fakkaatu irraa dhaabbachuu dhiisanii sadarkaa ol aanatti Uummata Oromoo irratti bobba’anii saamaa, hidhaa fi ajjeessaa jiru. Harmeen Oromoo har’as akka boose jirti. Uummatni Oromoo qaanii caalutti tarkaanfatee jira.
OPDOn yakkaa fi hojii fokkisaa kana hundaa kan raawwachaa jirtu mataa ittiin naanesani ilaaluu dandeessu waan hin qabneef. “Itoophiyaan Suusii”yaroo jedhan dhuguma waan sammuun isaanii yaadu tahu danda’a. Umurii isaanii guutuu waa’ee gaarummaa fi bareedina Itoophiyaa dhaga’aa gudhatanii dhiisanii dhugaa jiru arguu fi hubachuuf rakkina qabu. Kan wajjin oolan, kan wajjin hojjetan, kan wajjin jiraatan yoo warra Itoophiyaa farsan tahe isaanis wajjin faarsuun uumaa namumaa ti. Kana malees tuffiin Uummata Oromoo kan maddu oolmaan isaanii warra Habashaa wajjin waan taheef akkuma isaanii yaadu. Mee ilaalaa galata Habashaa. Biyya keenya keessa, lafa keenya fudhatanii nagaan afaan isaanii qabatanii jiraachuu irra bahaa badaa nuun jechaa jiru. OPDOn robotii sammuu warra kanan Uummata Oromoo irratti saganteefamte waan taateef waan biraa irraa eeguun gowwummaa dha.
Karaa biraa gaaffiin abbaa biyyummaa Uummatni Oromoo kaasuu jiru gaaffii barbaachisaa hin taane namootni karaa qajeelaa irraa maqan kan kaasan itti fakkaata. Uummatni Oromoo mirgi koo naaf haa kabajamuu yaroo jedhu, “mirga kee isa kamitu si irraa sharafame” jechuu. Yaroo isaan dubbatan dhageefadhee baayyeen gaddaaf. Mee isinis yaroo Kononeel Abiyi dubbatu dhageefadha. Itoophiyaa boontuu seenaa ishee isa badhaadhaa sana itti deebifna jedha. Inni Itoophiyyaa nuyi hin beekne qofatti kan qabu fakkaata.
Umurii isaa caalaan qaba. Biyyi Itoophiyaa kan beekamtu beela, hiyyuma, baqataa fi nama ajjeesuudhan akka taheen beeka. Waan kana keessaa isa kamitu akka isa boonsu naaf hin galu. Sababa baqatoonni Itoophiyyaa biyya lafaa irraa baayataniif jecha pass portii Itoophiyaa baatanii deemuun qaanii ture. Visa malee biyya baayyee seenuun rakkoo ture. Sammuu isaa isa micamaa turee yaadaa seenaa hin ture fi hin jirree deebifnee fidhana jechuudhaan haala qabataamaa biyyi sun keessa jiru hubachuu dadhabuu irraa kan ka’e biyyicha gara badii dandamachuu hin dandeenyeetti oofaa jira.
Jijjiramni OPDO afaaniin odeessuu qofa dha. Uummatni Oromoo har’asisa durii caalaa hidhamaa, ajjeefamaa, saamamaa fi dararamaa jira. Rakkinni OPDO inni guddaan ilmaan nafxanyootaa Afaan Oromoo waan dubbataniif aangoo gugguddaa horatanii Uummata Oromoo lafa irraa duguganii balleessuuf warra kaayyoo qabaniin liqifamuu dha. Kan qotee bulaa Ormoo lafa isaa irraa buqqisee hiyyumatti darbee, lafa Oromoo gurgurchuun sooromee baacaa jiru ilmaan nafxanyoota warra akka Alamuu Simee seeraa ol jiru. Warra akka Kumsa Dammaqsaa nama Master Pilaana Finfinnee duraa baase ilmaan nafxanyaatti. Maqaa sobaa kan mogaafate Oromoo gowwomsuuf qofa.
OPDOn dantaan wal xaxxee waan jirtuuf saaxila wal baasuu baayyee sodaatti. Hunduu bokkoo mataa isaa qaba. Kanaafuu akka hoolaa maraamrtoon qabee utuu of irra naannooftu bakka jirtuu utuu hin ka’iin akka haftu ifa jira. Waan nama hin gallee tokko akkaata itti namni Oromoo tokko tokko yaadu dha. Abayee Xayyii sukaara hate jedhamee akka seeratti dhiyaatu gaafachaa oola. Alemu Simee namni qotee bulaa Oromoo lafa irraa haxxaa’ee lafa isaanii gurgurataa jiraate maqaa isaa illee namni dha’u hin jiru. Wayyaaneen amam iyyuu ilmaan Oromoo haa reebdu haa ajjeeftu. Garuu gaaf tokko xiyyaara kaaftee utuu Uummata Oromoo hin gubiin mootummaa dhiiftee deemte. Har’a OPDOn biyya Oromoo utuu xiyyaaran gubaa jirtu nu ceesifti jennee eegachuu fi jala deemuun essaa dhufaa? Eyyee OPDOn namoota xawalwaallee bitatee dongora uumuuf horii uummata Oromoo saamte of harkaa qabdi.
Walii gala tibbana waan uummanti keenya waan gaafachuu qabu:
Hidhaamtoonni maqaa ABO mana hidhaa keessatti dararamaa jiran haala duree tokko malee hatattamaan warra akka Kononeel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee haa hiikaman.
Waajiraalleen ABO cufan hundi haa banaman, ABO hireen biyya Oromoo mara keessatti waajiraa banachuu fi karaa nagaa qabsawwuu eegamuuf.
WBO adamsuun daddaffiin haa dhaabatu. Mana hidhaati Qarree fi Qeerroo guuruun haa dhaabbatu.
Komandi postiin biyya Oromoo irraa buqqaa’ee RIB gara qubsumma isaa haa deebi’u.
Daangaan Oromiyaa haa kabajamu, yoo humna OPDO ol tahee argame Qeerroo fi WBOn itti haa darban.
Hattoonni fi yakkamtoonni warra akka Alamuu Simee mana seeratti haa dhiyaatan.
Injfannoo Uummata Oromoof!
Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu! Warri ABOtti shiraa turan wal saaxiluu jalqaban